မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ | ShweProperty.com
ငှားရန် - ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းတွင်…
အမျိုးသမီးသီးသန့်အဆောင်သစ်။ လှည်တန်းစင်တာ အနီး ၊ စိန်ဂေဟာ အနီး လှည်းတန်း (၃)လမ်းထိပ် ,၆ လွှာ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊…...
အမျိုးသမီးသီးသန့်အဆောင်သစ်။ လှည်တန်းစင်တာ အနီး ၊ စိန်ဂေဟာ အနီး လှည်းတန်း (၃)လမ်းထိပ် ,၆ လွှာ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊…
Advertiser : Aye Moh Moh Aung
Property ID: S-1203444
Office no : 09 2174100
Br-1 , ကျောက်ပြာခင်း , ထပ်ခိုးပါ စီပွာရေးလုပ်ရန်နှင့် ရုံခန်းဖွင့်ရန် အထူး သင့်တော်သည်။ အခြားလိုအပ်သော စာရင်းများကိုလည်း…...
Br-1 , ကျောက်ပြာခင်း , ထပ်ခိုးပါ စီပွာရေးလုပ်ရန်နှင့် ရုံခန်းဖွင့်ရန် အထူး သင့်တော်သည်။ အခြားလိုအပ်သော စာရင်းများကိုလည်း…
Listed 14 September 2019
Property ID: S-1203094
Mobile no : 09956454062, 09422656428, 09767096453
ငှားရန် - 33 Street (၃၃ လမ်း)
*Location – 33 Street , Pabedan Town ship. *Price –4Lakhs *Property Type — Apartment (4F) *Area — 750 sqft *Rooms formation - 1-Bedroom , 1-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet, 1-Bathroom and ready to live located at Pabedan Town ship. ...
*Location – 33 Street , Pabedan Town ship. *Price –4Lakhs *Property Type — Apartment (4F) *Area — 750 sqft *Rooms formation - 1-Bedroom , 1-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet, 1-Bathroom and ready to live located at Pabedan Town ship.
33 Street (၃၃ လမ်း)
Property ID: S-1205537
ငှားရန် - Yadanar Street (ရတနာလမ်း)
*Location – Yadanar Road , South Okkalapa Town ship. *Price – 3.5 Lakhs *Property Type — Apartment (4F ) *Area — 1200 sqft *Rooms formation - Hall Type ,Living room and Kitchen. *Other Features — RC ,1-Bathroom and ready to live located at South Okkalapa Town ship. ...
*Location – Yadanar Road , South Okkalapa Town ship. *Price – 3.5 Lakhs *Property Type — Apartment (4F ) *Area — 1200 sqft *Rooms formation - Hall Type ,Living room and Kitchen. *Other Features — RC ,1-Bathroom and ready to live located at South Okkalapa Town ship.
Listed6September 2019
Property ID: S-1205009
ငှားရန် - စမ်းချောင်းတွင်ပြင်ဆင်ပြီး…
@nice place #nice room...
@nice place #nice room
Property ID: S-1202754
Mobile no : 09 774 588577
ငှားရန် - စမ်းချောင်းမြို.နယ် ပြည်လမ်းမ…
Hall , အတွင်းလှေခါးပါ ,အောက်ထပ်ကြွေခင်း ,အပေါ်ထပ် ရှားထိုခင်း , wc-2 စုံ ...
Hall , အတွင်းလှေခါးပါ ,အောက်ထပ်ကြွေခင်း ,အပေါ်ထပ် ရှားထိုခင်း , wc-2 စုံ
Listed 16 July 2019
Property ID: S-1202751
ငှားရန် - ရန်ကင်းမြို့နယ် မြန်မာပလာဇာ…
ပေအကျယ် -960 Sqft / တအိမ်လုံးပါကေးခင်း / အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး / MBR-1 / SBR-2 / AC -4/ ၀ရံတာ မီးဖိုဆောင် ကြွေပြားခင်းကပ် / ဆန်းရှိတ်မိုးထား…...
ပေအကျယ် -960 Sqft / တအိမ်လုံးပါကေးခင်း / အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး / MBR-1 / SBR-2 / AC -4/ ၀ရံတာ မီးဖိုဆောင် ကြွေပြားခင်းကပ် / ဆန်းရှိတ်မိုးထား…
Property ID: S-1202568
ငှားရန် - စမ်းချောင်မြို့နယ် မကြီးကြီးလမ်းတွင်…
Property ID: S-1201716
ငှားရန် - အလုံလမ်းမတန်းတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမ 25×70 2BR AC ပါကေး ပြင်ဆင်ပြီး လူနေရုံးခန်းဖွင့်ရန်အထူးသင့်တော်ပါသည်။...
အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမ 25×70 2BR AC ပါကေး ပြင်ဆင်ပြီး လူနေရုံးခန်းဖွင့်ရန်အထူးသင့်တော်ပါသည်။
Property ID: S-1198317
apartment, for rent in all townships,